Noma yimuphi umuntu ukuze baphile, udinga okuthile ukuba adle, into ukugqoka, thatha indawo okungenani ebusuku. Ngenxa yakho konke lokhu, kusobala, udinga ukukhokha, bese babe hlobo ezinye imali. Zingase zihlanganisa lezi ezilandelayo: engenayo bemikhakha yetemabhizinisi, ukuthengiswa kwempahla, kokuwina iLotto. Nokho, umthombo oyinhloko ukuthola iholo eRussia kusalokhu izinhlobo zamaholo ezingasetshenziswa ziyehluka okuncike ngezigaba into.
amaholo Okuzisholo futhi yangempela
Ngokwezinhloso zalesi ithiyori kwezomnotho, amaholo ehlukaniswa okuzisholo futhi ngempela. Kulinganiswe ngo - ngqo izimali ezikhokhelwayo kumsebenzi ukuze kwenziwe imisebenzi yakhe okhokhelwayo. inkokhelo Real - inani izimpahla, imikhiqizo ukuthi abantu Ungathenga ngesikhathi imali emuva.
izinhlobo Okuzisholo futhi yangempela inkokhelo exhumene, kanye ezingeni amanani. Ngokwesibonelo, uma inani inkokhelo okuzisholo azonyuka ngo-15% kanye amanani ukwenyuka amaphesenti ayisishiyagalombili, inani inkokhelo yangempela bayovuka% 7 kuphela. Ngakolunye uhlangothi, uma izimo ezifanayo, amanani kuzokwanda 20%, inkokhelo yangempela uzokwehla by 5%, naphezu ukwanda par.
Imiholo kanye nezinhlobo zayo kuye indlela yokukhokha
Ngokwe kwindlela yokukhokha inkokhelo, ukuhlukanisa zayo ezihlukahlukene ngokomzimba futhi yemali.
inkokhelo Yemvelo ekhishwe ngesimo ukudla, izingubo, izinto zasendlini kanye nezinye izinto. Ngesikhathi esifanayo share yayo umthamo isamba izinkokhelo asikwazi ukweqa amaphesenti amabili. Lwemali iholo ekhishwe, ngokulandelana, ngesimo amafa ketshezi: ukheshe noma ukudluliswa ekhadini.
Kumele kukhunjulwe ukuthi amafomu okwenza imali zemvelo inkokhelo kuncike PIT.
Umholo eziyisisekelo futhi ezengeziwe
izinkampani Ukuze kubalulekile ukuhlala ngokwahlukana ekukhokheleni umsebenzi ngesikhathi zamabanga aphansi naphezulu. Uhlobo lokuqala izinkokhelo ukushaja ngqo isikhathi wasebenza, noma ubuningi ekhiqizwa, kanye noma yiziphi izindleko ezengeziwe ngoba okweqa umsebenzi wenzeke. Ngamanye amazwi, laba izinkokhelo ukuthi zihlobene ngokuqondile ukusebenza kwabasebenzi imisebenzi yabo umsebenzi.
iholo engeziwe ibalwa ngesikhathi hhayi kuhlobane ngokuqondile imisebenzi esemthethweni, kodwa esakhokhwa umtsetfo lokhona. Lokhu kungabandakanya ekukhokhweni nabancelisayo ukusebenza amakhefu, oyithandayo iwashi intsha esikhulakhulile wahlanganyela ekwenzeni imisebenzi yomphakathi noma umphakathi, amaholide (kufaka ekhatsi kuceceshwa), izibhedlela, njll
izinhlobo ezintsha inkokhelo
Ukuthuthukiswa ezizimele kuholele ukuvela izinhlobo ezintsha inkokhelo eRussia. "White" futhi "abamnyama" "White" - ukuthi ingxenye nomholo ukuthi umqashi okhokhela olusemthethweni, okuyinto emalini izintela yomphakathi, siqu imali yentela ebanjwayo kusukela abasebenzi. Ngenxa yalokho, "black" - imali ikhokhwe "imvilophu", noma ukuthi sisebenti sikhokhelwa ngokwethukela, ngokudlula izintela ezahlukene.
Izizathu ukwahlukana kuyaqondakala ngempela: ngaleyo ndlela umqashi efuna ukuba ubalekele izindleko ezingadingekile, futhi umsebenzi - ukukhulisa izinga labo inkokhelo yangempela. Inzuzo ibonakala sobala kulabo futhi abanye. Eqinisweni, i-umsebenzi, lesi simo ngokuvamile disadvantageous, ngoba kuholela ekulahlekelweni iminikelo impesheni, ngaphezu, umsebenzi okunjalo kuyoba nzima ukuba uthole imali-mboleko noma okuthile ukuqinisekisa ikhono lazo ukukhokha Kwezinye izimo. Kufanele kukhunjulwe ukuthi ukwahlukana phakathi kwezinhlobo abamhlophe nabansundu inkokhelo kuwukwephula umthetho. Lapho izinga kusobala amaholo aphansi kakhulu umqashi ugijima ingozi yokujeziswa ukuqinisekiswa intela kanye lokuhlolwa kwezisebenzi, izinhlawulo.
Mayelana ukubaluleka ikhono kahle ukubala esibhedlela
Isakhiwo kanye nendlela okwakheke ngayo umongo kusho. Isondlo, ukwehla, izimpahla fixed ezimali
Balanoposthitis ezinganeni: Ubangela, Izimpawu kanye Ukwelashwa
Izidakamizwa "Parlazin". Yokusetshenziswa
Ukuhlobisa kwanoma iyiphi indlu - Blue Imbali
I-Cloning: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo. Uwukuthi zonke izizathu eziphikisa cloning womuntu
"Penekrit": yokusetshenziswa, ukusetshenziswa, ukubuyekezwa